My Astro View: နတ်ရူးလား၊ လူရူးလား
မဟာဂီရိအစရှိသော မိရိုးဖလာအစဉ်အဆက် ကိုးကွယ်လာသော နတ်များကို ကိုးကွယ်မှုနှင့် ပက်သက်၍ လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ မိန့်ဆိုချက်ကို တင်ပြလိုပါသည်။
ဘာ..နတ်ကိုးကွယ်တယ် ဟုတ်လား ..သယ် .. ထေရဝါဒ မပီသလိုက်လေတယ်.. နာရင်းဖြတ်ရိုက် လိုက်ရ သွားအစုံလိုက် ကျွတ်ရော့မယ်။ ဘယ်လို.. နတ်က မစတယ် ဟုတ်လား။ နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်တော့ ဦးရှင်ကြီးက ဘယ်ရောက်နေသလဲ။ ဘယ်အလေလိုက်နေလို့ သူ့ကို ကိုးကွယ်တဲ့ ရေငန်ဒေသခံတွေကို မကယ်နိုင်ရသလဲ.. ဒီနတ်ရူးတွေကတော့.. ဆိုတဲ့ .. ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ လက်တွေကို အခုထိ ဖြေမချနိုင်တဲ့ ထေရဝါဒီဆိုသူတွေကို ဒီဆောင်းပါးနဲ့ ဖြတ်ရိုက်ပါရစေ။
မဟာဂီရိအစရှိသော မိရိုးဖလာအစဉ်အဆက် ကိုးကွယ်လာသော နတ်များကို ကိုးကွယ်မှုနှင့် ပက်သက်၍ လယ်တီဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ မိန့်ဆိုချက်ကို တင်ပြလိုပါသည်။
မဟာဂီရိ အစရှိသော မိရိုးဖလာ ကိုးကွယ်ကြသော နတ်များကို အစဉ်မပျက် ကိုးကွယ်ခြင်းအမှုသည် လူတို့၏ ကောင်းကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းရန် အမှုတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်းကို အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော်တွင် ဟောတော်မူသည် တစ်ချက်
ရွာစောင့်နတ်၊ မြို့စောင့်နတ်၊ တိုင်းစောင့်နတ်၊ ပြည်စောင့်နတ်တို့ကို အစဉ်အလာ မဖျက်ရအောင် ကိုးကွယ်ကြသော မြို့ရွာတိုင်းပြည်များ အကျိုးစီးပွား မဆုတ်ယုတ်သော ပရိဟာနိယ ဓမ္မတစ်ပါး ဖြစ်ကြောင်းကို မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ်၌ ဟောတော်မူသည်တစ်ချက်
နေ့နေ့ညည ပူဇော်ကြပေကုန်သော လူတို့အား နတ်အပေါင်းတို့သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြုကြကုန်လော့ဟု ရတနသုတ်တွင် ဟောတော်မူသည်တစ်ချက်
လူတို့သည် အိမ်သစ်တက်သောအခါ ရဟန်းသံဃာတော်များကို လှူဒါန်းကျွေးမွေးရာ မဟာဂီရိအစရှိသော အိမ်စောင့်နတ်များကို အမျှဝေရမည် ငါတို့ကို အမျှဝေသည်ဟူ၍ ထိုအိမ်ရှင်တို့ကို အိမ်စောင့်နတ်တို့က ဘေးကင်းအောင် စောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့် ထိုအိမ်ရှင်တို့ကို တဖန် ပူဇော်ကြကုန်သည် မြတ်နိုးတနာ ပြုကြ ကုန်သည်ရှိသော် ထိုအိမ်ရှင်တို့သည် အခါခပ်သိမ်း ကောင်းမြတ်သော မင်္ဂလာကျက်သရေတို့ကိုသာ မြင်ရ၊ တွေ့ရ၊ ကြုံရကုန်သည်ဟု ဟောတော်မူသည် တစ်ချက်
ထိုအချက် ၄ ချက် ထုတ်ပြကာ မြတ်စွာဘုရားသည် မဟာဂီရိ အစရှိသော နတ်များကို အစဉ်အလာ မပျက်ရအောင် ကိုးကွယ်ပူဇော်ကြသော အမှုကို သုတ္တန်အရပ် တို့၌ ချီးမွမ်းတော်မူသည်။ အစဉ်အလာ ကိုးကွယ်မြဲအတိုင်း မကိုးကွယ်ကြသောသူတို့အား အကျိုးစီးပွား ဆုတ်ယုတ်ရန် အကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ်တွင် ဟောတော်မူသည်ဟု လယ်တီဆရာတော်ကြီးက မိန့်ကြားပါသည်။
ထိုနတ်တို့ကို ကိုးကွယ်မှု ဟူသည်လည်း ထိုနတ်တို့သည် သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာဂုဏ်တို့နှင့် ပြည့်စုံကြပေကုန်သည်ဟု ဒက္ခိနေယျအနေဖြင့် ကိုးကွယ်ရသည် မဟုတ်၊ ကံကို လုံးလုံးလွှတ်၍ ထိုနတ်တို့ သည်သာ ကောင်းကျိုး၊ မကောင်းကျိုးကို ပေးနိုင်သည်ဟု ကိုးကွယ်ရသည်ဟုလည်း မဟုတ်ဟု မိန့်တော် မူသည်။
ဒက္ခိနေယျဂုဏ် ထိုက်၍ ကိုးကွယ်ရသည် မဟုတ်သော်လည်း အနာရောဂါ မကပ်ရောက်ရန် ဆေးဆရာကို ကိုးကွယ်ရသကဲ့သို့၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ ပေါများစေရန် သူဌေးသူကြွယ်များကို ကိုးကွယ်ရသကဲ့သို့၊ ခပ်သိမ်းသော စည်းစိမ်ကျက်သရေ ရစေရန် မင်းစိုးရာဇာတို့ကို ကိုးကွယ်ရသကဲ့သို့ နတ်တို့ကို ကိုးကွယ်ရခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြထားပါသည်။
နိဂုံးချုပ် ဆိုရသော် နတ်ကို ကိုးကွယ်ပသ လုပ်ကြရသည်မှာ နတ်၏ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာဂုဏ်လိုက်၍ ကိုးကွယ်ပသခြင်း မဟုတ်၊ မင်းစိုးရာဇာကို မထီမဲ့မြင် မပြုကောင်းသကဲ့သို့ နတ်ကိုလည်း မထီမဲ့မြင် မပြုကောင်းသကဲ့သို့ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆရာဝန်ကို အားကိုးပုံမျိုးနှင့် ပသကိုးကွယ်ကြခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း နားလည်အပ်ပေသတည်း။
(အောက်တိုဘာလထုတ် သူရဇ္ဇမဂ္ဂဇင်းမှ ဦးတင်ဦး(ကျူရှင်)၏ အဘယ့်ကြောင့် နတ်ကို ကိုးကွယ်ပသ လုပ်နေကြသနည်း ဆောင်းပါးမှ ကောက်နုတ်တင်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည် အဆိုပါ ဆောင်းပါးတွင် ယခုထက်ပို ပြည့်စုံစွာ ဖတ်နိုင်ပါသည်။ )
ဒီဆောင်းပါးရဲ့ နတ်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရ ရည်ညွှန်းချက်ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နာမည်ကျော် ၃၇ မင်းနတ် ပါ၊ မပါ မသိပေမယ့် မဟာဂီရိကို ထပ်တလဲလဲ သုံးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ တချို့သော မြန်မာ့ဗေဒင်ပညာမှာ ရိုးရာဖော်ပေးတဲ့ နည်းစနစ်တွေ တွေ့ရပါတယ်။ ဘယ်မဟာဘုတ်ကြွင်း၊ ဘယ်နေ့နံသားဆို ဘယ်နတ်က စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတဲ့ ဟောချက်မျိုးအပြင်၊ ယတြာအရ ဦးရှင်ကြီးတို့ မဟာဂီရိတို့ကို ပူဇော်ရတာ မျိုးတွေ ဖတ်ရ လေ့လာရဖူးပါတယ်။
မင်းကရော.. ကိုးကွယ်လား မေးလာရင် ဟင့်အင်းပါ။ လုံးဝပါ။ နတ်တွေကို မကိုးကွယ် မပသသလို မကဲ့ရဲ့ မရှုတ်ချပါဘူး။ လူ့စည်း၊ ဘီလူးစည်းဆိုတဲ့ စကားဟာ အလကားထားခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ့်စည်းနဲ့ ကိုယ်နေရုံပါပဲ။ ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်းကို နတ်နဲ့ ပက်သက်လို့ မေးမြန်းတုန်းက လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ကို မကောင်း မပြောသလို သူတို့နဲ့လည်း မပက်သက်ဘူးလို့ ဥပမာနဲ့ ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ထိုနည်းတိုင်းပါပဲ။
သွားလေသူ ဆရာအီကြာကွေးကတော့ နတ်ရူးတို့ ကြောင်နိုင်ပေဆိုတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် ရေးပြီး နတ်တွေကို ဆော်ပလော်တီးဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူ့အိမ်နားက ရုက္ခစိုး အိပ်မက်ပေးရာက စပြီး ဟာသလိုင်းကနေ .. ပုတီးတွဲလောင်းနဲ့ ဖြစ်သွားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကဲ..နတ်ရူးတို့ပဲ ကြောင်နိုင်မလား၊ လူရူးတွေပဲ ကြောင်နိုင်မလား။ လယ်တီဆရာတော်ကြီးထက် တော်တဲ့ တတ်တဲ့ ကျမ်းတတ်ပေတတ် ပုဂ္ဂိုလ်တွေ နတ်တွေကိုမှ ပွဲထုတ်မိတဲ့ ကျွန်တော့်ဆီမှာ ဝင်ရောက် ဝေဖန် ကဲ့ရဲ့နိုင်ပါပြီ။
ဗဟုသုတတွေ ဝေမျှတာ ကျေးဇူး ညီလေးရေ။
မျှဝေတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုYoungGun တကယ် ဗဟုသုတရစေတဲ့ စာပါ..
စာများများဖတ်ပြီး လက်တွေ့ကျကျ တွေးတတ်လာရင် ဖြစ်နိင်မဖြစ်နိင်ဆိုတာ တွေးတတ်လာမှာပါပဲ။
ကျနော်တော့ ယုံတယ် မယုံဘူးထက် မပါတ်သတ်အောင်ပဲ နေတယ်။ သူလည်း ရှိရင် သူ့ဘာသာနေ ကိုယ်လည်း ကိုယ့်အထာနဲ့ ကိုယ်ပေါ့။ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးစိတ်နဲ့ လောကဓံ ကို ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့စိတ်ရှိရင် တခြား အားကိုးရာကို မရှာတတ်ကြပါဘူး။
မှန်ပါတယ်.. မိတ်ဆွေ..။ . ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သတိပေးတာ။
ဗေဒင်ဆရာလေးက ဒီပို့စ်နဲ့ နတ်ရူးတွေကို ဖြတ်ရိုက်ပါတယ်တဲ့။ ရွှန်းမီကလည်း ပိတ်ရိုက်ပါတယ်တဲ့။ (flash) လို့ ပြောတာပဲဗျာ။
ကျွန်တော်လည်း ဘယ်လို ရိုက်ရင် ကောင်းမလဲ မသိဘူး။ လောလောဆယ်မှာ ချောင်းရိုက်မခံရဖို့တော့ အတော် ကြိုးစားနေရတယ်။ =)
aww. seem I need to ask Bill Gate which gods he offered to become the richest one. :D
As far as I know, in Buddha time there is no Min Mahar Giri. :D
And as your post, people pay respect to doctors bcs of health, the riches bcs of wealth. ok. I understand that.But I think your reason to offer gods bcs of fear to lose something can not be accepted.( just my view)
what we need to be aware is Buddha sometime blamed his right flank, Ashin Sariputara and pointed his some unawareness. so we need to know everyone can make wrong as long as one is not Buddha.
And the Buddhists can also present you many quotes of Buddha not to offer those gods.
But thank you for your post. there is always something to consider in all your post.
ဘီလ်ဂိတ်သာ မြန်မာပြည်ပေါက် ဆိုရင်တော့ သူအောင်မြင်ဖို့အတွက် အနည်းနဲ့အများဆိုသလို . ဆွမ်းကွမ်းလေးတော့ ကမ်းမိမယ် ထင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်က နာမည်ကျော် အိုင်စီတီကုမဏီ တော်တော်များများ ပွဲထိုးနေဆဲဆိုတာကို မျက်မြင်လေ့လာကြည့်စေချင်ပါတယ်။ မင်းမဟာဂီရိက ဗုဒ္ဓလက်ထက်မှာ မပေါ်တာ .. အသေချာပါပဲ။ ဆရာတော်ဘုရားက ဥပမာပေးလွယ်အောင် ပြခဲ့တာပါ။ နတ်ကို ကိုးကွယ်ဖို့ မြှောက်ပေးမထားပါဘူး။ နတ်ကို ဖနောင့်နဲ့ပေါက်ဖို့ကိုလည်း ညွှန်းမထားပါဘူး။ နတ်ဆို .. အမေနှမ ပုံပေးပြီး ကိုးကွယ်တတ်သူနဲ့ နတ်ဆို.. ဘောပဲကွာလို့ ထင်သူတွေအကြားမှာ မျှတတဲ့အမြင်တစ်ခု ပေါ်လာအောင် ပြချင်တာပါ။ :P